RIP Laptop iray isaky ny zaza | Avy amin'ny Linux
RIP Laptop iray isaky ny ankizy
diazepam | | About us
Ilay zazavavy kely ao amin'ny fianakaviana
Ao an-tokotany sy an-dakozia
Miaraka amin'ny reniranon'ny hazavana
Nanazava ny lohanao ianao
Amin'ny taranaka iray
Tsy nanantena ny hahagaga izany
Nanafaka anay ny siramamy nataonao
Ary koa ny kakaoo
Vitsy ireo andininy ireo
Ny stanza sy ny fiderana
Nambolena tany an-tsaha
Nihalehibe n'aiza n'aiza
Miaraka amin'ny keyboard anao velvet
Tsy hahita fianarana isika
"Elegy to the ceibalita" nataon'i Titu Naburu. Navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana CC BY-SA.
Ary izao zamba iray, izay azo hiraina amin'ny mozikan'ny "Añoralgias" (samy manana ny dikan'ny Les Luthiers sy Los Chalchaleros)
Nihira tamim-pitiavana lehibe ity zamba ity
mankany amin'ny tetikasa iray 10 taona lasa izay,
revolisionera ho an'ny hafa.
Solosaina finday ho an'ny ankizy tsirairay.
Ary androany misaona ny hirako aho
satria niantsoantso izy ireo: "Tsy mandeha intsony" (TSY MANDEHA INDRINDRA).
Mbola tadidiko foana: Ho an'ny mangga maitso 100, (na roanjato)
adala ny fananana netbook,
na dia tamin'ny Linux aza dia nilamina izany.
Faly ireo ankizy mpianatra.
Amin'ny fiezahana, hoy aho, tsy misy very,
na dia tsy nanana hatsaran-tarehy aza izy.
Fa tonga ny fiakaran'ny takelaka,
ny tsy fahampian'ny hevitra lasa mahafaty.
Ary na dia tsy dia ratsy loatra aza ny varotra,
ny fifantohan'izy ireo amin'ny fitaovana mora vidy sy milamina, (tsara)
nanjary marefo ilay tetikasa,
mijanona ary mbola, toy ny zeibal.
Namela antsika tamin'ny voankazo isan-karazany,
en India, Rwanda na ao amin'ny Uruguay.
Ary na dia fantatro aza ny lesoka misy
(Mila vola bebe kokoa izahay ho an'ireo institiota),
Manolotra aho, somary sarotiny:
ho an'ny mpianatra tsirairay, Raspberry Pi.
Mpampianatra izay nivoaka voaofana tsara,
lalao mahasarika kokoa sy drafitra tsaratsara kokoa.
Fifandraisana tsara kokoa, tompokolahy,
Eo anelanelan'ny drafitra, sekoly, ray aman-dreny sy mpianatra,
any Montevideo sy na aiza na aiza,
ARY TSY MITSIPIKA IZAO IREO PRINTY IREO (Notereko ny rima).
Rehefa manararaotra ireto torohevitra ireto,
milamina, efa manana fototra ianao,
izay hanome avonavona fanabeazana
ary kapohio ireto ronono ratsy ireto. (vita ny amin'iny)
Handeha aho ary hanararaotra azy ireo.
Sambatra ny fiandohan'ny sekoly.
vaovao farany: Tsy maty io. Nanao fety aho.
Ny OLPC koa dia nanondrana outsourcing ny maro amin'ireo rindrambaiko sy singa fampandrosoana satria lasa lasa fitaovana sy OS agnostika kokoa ny fikambanana, mifantoka amin'ny soatoavina fototra - fanabeazana.
Noho izany: Ho ela velona ny Laptop iray isaky ny ankizy sy ny mpandova azy, ny Raspberry Pi, Arduino ary smartphone miaraka amin'i Firefox OS
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » RIP Laptop iray isaky ny ankizy
yorugua dia hoy izy:
Fa inona ????
ary Uruguay aho….
Mamaly an'i yorugua
Izay no lazaiko.
Tsy afaka milaza izahay fa tsy tena izy io.
Hugo Iturrieta dia hoy izy:
Valiny tamin'i Hugo Iturrieta
hola dia hoy izy:
Tokony hanaraka ireo rohy ianao mba hahatakarana, amin'ny fahitana voalohany dia misafotofoto amin'ny fahitana voalohany
Jona 12 dia hoy izy:
Any Arzantina, mitohy ny netbook maherin'ny 3.500.000 natolotra ary fihenan-danja lehibe amin'ny fizarazarana nomerika ao amin'ny firenena, ankoatry ny fananana indostrian'ny rindrambaiko matanjaka any Amerika Latina.
Valiny tamin'ny Jun12
TheGuillox dia hoy izy:
tsy manatitra xo intsony izy ireo, netbook fotsiny no entiny
Mamaly an'i TheGuillox
NaBUru38 dia hoy izy:
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny drafitra Ceibal dia manohy miasa. Saingy tsy misy ny ho avy ho an'ny XO (izay antsoinay hoe ceibalitas), ary izany no lazain'ny elegy ahy.
Valiny amin'i NaBUru38
Mario Guillermo Zavala Silva dia hoy izy:
Tena tsara !!!!
Valiny tamin'i Mario Guillermo Zavala Silva
Fomba fampidinana horonantsary YouTube hianarana
Miezaka manatsara ny endriny i Ubuntu